Soosaarayaasha Saldhigga Korontada ee la qaadan karo & Warshada & Alaabta | iFlowPower
Saldhigga korantada ee la qaadan karo
Tijaabada iyo Shahaadooyinka
Nabdoonaanta ayaa ah ahmiyadeena ugu sareysa. Waxaan ku soconnaa siyaasad tayo aad u adag oo ku saabsan dhammaan howlaha. Qeybo iyo qaybo, wax soo saar iyo qalab ayaa ku jira kormeer si loo hubiyo inay u hoggaansameyso sharciyada warshadaha caalamiga ah iyo aaminka, ROHC, FCS, UN3.3, MSD. Waa DNA-da noolaha aan kala hormarinno hal-abuurka teknolojiyada si aan u gaarno tayo dhammaystiran oo aan hagaajino alaabada.
Waxbadan oo naga saabsan
Fikrado kasta? AAN OGAANO
-DhacdoNala soo xiriir si aad u hesho qiimeyn iyo samballo
Xadhig deg deg ah
E-mayl: La xiriir@iflowpower.com
WhatsApp / Line / Rasuul: +861379004432
Xuquuqda daabacaadda © 2022 shirkadda tikniyoolajiyadda Iflowpower Limited - Dhamaan xuquuqaha ayaa ilaaliya.